Crypto Nentsha - Blockchain Izindaba
ukuthandwa cryptocurrencies, ifinyelele izikali ezifana, ukuthi dlula kuphela ukuvilapha kakhulu noma abaqaphe kakhulu kulo mkhakha iqembu. It kuvela ukuthi isibindi nokukhuthazela kuboniswa hhayi kuphela abahwebi kanye zimali amashumi iminyaka yokudayisa isipiliyoni Ukuhwebelana, kodwa nangokuzama intsha ezejwayelekile.
izingane Modern abazalwa esidijithali, zizungezwe zonke izinhlobo amagajethi kusukela ebuntwaneni, futhi baqala ukuxhumana ngama-computer ngaphambi dlule zukulwane. Kusukela esemncane, banayo amathuba ukukhulumisana okunjalo ezingafakwanga ngiphuphe izizukulwane ezidlule. Ngakho-ke, abameleli Z isizukulwane ayashesha abaqeqeshiwe futhi bazizwa organic emhlabeni ubuchwepheshe yesimanje.
Erik Finman, omunye yimpumelelo kakhulu intsha emkhakheni cryptocurrency, ku 12 iminyaka wazizwa amathemba bitcoin. Ukuze 6 iminyaka, Waletha isimo sakhe sedijithali 400 bitcoins lingalingani, okuyinto engcono kakhulu kunaleyo 4 million ngo-dollar okulingana ngesilinganiso samanje. Futhi konke kwaqala ngo 2011 nge $ 1000 alondolozwa dinners lokuzalwa izipho. Bitcoin oko kuwufanele $ 12.
ngu 2013, bitcoin lase likhule kakhulu kangangokuba amafa ithengiswe ka Eric babe ngokwanele ukuqalisa isevisi ukucinga abafundisi Botangle, nazo kamuva ethengisiwe bitcoins. I abasha mfihlo-Umthandi womculo ngeke ayeke khona, ngokombono wakhe, bitcoin azigcina utshalomali isikhalazo, nokubaluleka kwalo ongafinyelela ayisigidi. I-isicebi osemusha futhi ukholelwa ukuthi uhlelo lwemfundo zanamuhla zakudala, kanye ne-YouTube futhi Wikipedia bangafundisa okuningi. Waze phikisana abazali bakhe ukuthi wayengeke ukuya eyunivesithi uma angazuza ayisigidi ngaphambi kokuba afinyelele ebudaleni. Akukho sifundo embi isizukulwane yesimanje?
Kunjalo, Eric Finman akuyona kuphela isibonelo ingane ezizoqhubela cryptocurrencies. main yakhe “imbangi” kuyinto Eddy Zillan, owaqala waba nesithakazelo kubantu mfihlo-asebenzayo eneminyaka engu 15. Kuyinto usemncane kakhulu ukuqala i-akhawunti Coinbase, kodwa Eddy abayekanga ke futhi achusha imithetho isayithi. Into yokuqala ayenza kwaba ukuthenga Ethereum ngoba $ 100. Kuyaphawuleka ukuthi ngaleso sikhathi kwakunabazalwane abangu hhayi amakhulu Blogger nomagazini, akekho ozokwazi ukufundisa kanjani ukuba senze okufanele. Ngaphandle kwalokhu, umfana wathola kuqala $ 10 I-kwamahora ambalwa. Lokhu kungase asehluleki amshaya, ngoba 10% emahoreni ambalwa – ukukhula kakhulu. Kamuva yena etshaliwe mayelana $ 12 ayizinkulungwane ku Crypt. Ukuze ngonyaka bakhulisa ukuze $ 350 ayizinkulungwane. Manje Zillan kuyinto 18 ubudala, ungumnikazi iphothifoliyo nibaluleke ukudlula $ 1 abayizigidi ezingu nemisebenzi e Consulting kwakhe okuqinile siqu Cryptocurrency lwezezimali.
Esinye “Cryptoteenager” – Andrew Cory, 11-ngonyaka, Umfundi yefomu 6th wakwazi ukubhala mayelana Bitcoin iyonke incwadi, lapho he cabangisisa umbono wakhe we okushiwo cryptocurrency futhi blockchain. Ibhuku, mhlawumbe uchwepheshe kunani nonke ku kryptovlyutam Lingase ukuthengwa kwezincwadi ku-Google Play. inzuzo, kunjalo, kuhloswe ngokuyinhloko ezinganeni, okuyinto, Nokho, akusho kunganciphisa ngokuhlathulula ukusebenza kwawo. Andrew ngokwakhe, ngokusho kwakhe, enesizotha 0.02 bitcoins.
Kukhona abasha mfihlo-abathanda kanye “ababi”. Ngakho, Bitcoin Platinum, abaningi edukisayo, waba ngumuntu waseLenasia engamahlongandlebe umkhankaso. Nokho, umphakathi alalelwa ke ngesikhathi, futhi kwadingeka zivume ukuthi nabulungiswa yephrojekthi. Ngokusho kwakhe, ayehlele ukuqoqa kuphela $ 5,000.
Ngokusobala, esikhathini esizayo ukufuneka ongoti emkhakheni yomnotho digital ngeke kuphela zikhule. Futhi isiphakamiso, by wonke ama-akhawunti, ngeke zisale ngemuva noma.
Coincheck umemezela ukubuyiselwa kwemali luqale ngesonto elizayo
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 11.05.2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 14.05.2018